सावधान ! गुगलले प्ले स्टोरबाट हटाएका असुरक्षित १६४ एप, तपाईंको मोबाइलमा त छैनन् ? – Enepali Samchar
सावधान ! गुगलले प्ले स्टोरबाट हटाएका असुरक्षित १६४ एप, तपाईंको मोबाइलमा त छैनन् ?
March 10, 2021 adminLeaveaComment on सावधान ! गुगलले प्ले स्टोरबाट हटाएका असुरक्षित १६४ एप, तपाईंको मोबाइलमा त छैनन् ?
e nepalisamchaar /काठमाडौं । गुगलको प्ले स्टोरमा कयौं यस्ता एपहरु छन्, जुन फेक हुनुका साथै प्रयोगकर्ताको गोप्य डेटा समेत चोरी गरिरहेका हुन्छन् । गुगलले केही समय अगाडि मात्र आफ्नो प्ले स्टोरबाट १६४ एप हटाएको थियो ।
कूल मिलाएर यी एप १० करोडभन्दा बढीले डाउनलोड गरिसकेका छन् । कपीक्याट्ज भनिने यस्ता एपले महत्वपूर्ण र चलेका एपहरुको नक्कली प्रति बनाएका हुन्छन् र प्रयोगकर्तालाई ट्र्याक गरेर अप्रत्याशित किसिमका विज्ञापनहरु देखाउने गर्दछन् ।
यस्ता एपहरु माल्वेरबाट प्रभावित भएका समेत हुनसक्छन् । त्यसो त यस्ता १६४ एपलाई गुगलले आफ्नो प्ले स्टोरबाट हटाइसकेको छ । तर पनि त्यस अघि नै तपाईंले डाउनलोड गर्नुभएको छ भने तपाईंले आफ्नो मोबाइलबाट डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता छन् गुगलले प्ले स्टोरबाट हटाएका ‘कपीक्याट्ज एप‘
And few others with just package name